Espaina : Tsaraina Noho Ny Nahatrarany Kolikoly Ny Mpanao Gazety Roa Any Catalan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Oktobra 2012 0:43 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Español, Català
Hotsaraina any Catalan, Espaina amin'ny 27 Septambra 2012 i Albano Dante sy i Marta Sibina, tonian-dahatsoratry ny gazetiboky Cafè amb Llet [ca] ao amin'ny fileovan'i Alt Maresme ao amin'ny faritanin'i Girona. Josep Maria Via Rodons, filohan'ny Barcelona MAR Health Park Consortium sy ny filohan'ny mpanolotsainan'i Catalogne, Artur Mas, no nitory azy ireo noho ny fandefasany lahatsary manala baràka tamin'ny YouTube tamin'ny volana febroary 2011 izay manambara ny fisian'ny kolikoly ao amin'ny rafitra ara-pahasalamana any Catalogne izay adihadian'ny birao miady amin'ny kolilkoly ao amin'ny governemanta ankehitriny .
Tamin'ny 2010, rehefa nahenan'ny governemanta ny tetibola ho setrin'ny olana ara-bola nisy teo amin'ny sehatra ara-pahasalamana, dia nanomboka nanadihady ny fiasan'ny hopitaly tao amin'ny ( distrikan'i) comarca, Maresme nisy azy ireo ny tonian'ilay gazetiboky, izay nitarika azy ireo hamintina ny resaka mikasika ny fahasalamana any Catalan amin'ny ankapobeny. Nahavoaka tsikelikely sarintanin'ny tsy fanarahan-dalàna teo anivon'ny rafitra ara-pahasalamana manontolo sy ny fifandraisana misy amin'ny antoko politika matanjaka eo amin'ny faritra ry zareo, tafiditra ao anatin'izany ny Antoko Sosialista Catalogne (PSC) sy ny Convergència i Unió (CiU) i Dante sy Sibina.
Ho fanohanana an'i Albano sy Maera, tonian-dahatsoratry ny Cafe amb Llet
Amin'ny maha-mpanolosaina ara-pahasalamana ny Filoha Mas azy, dia voarohirohy amin'io raharaha io Atoa Via Rodons. Nangataka onitra €20,000 euros tamin'ny tonian'ilay gazetiboky Cafè amb Llet izy. Notsaraina mialoha ireo olona voarohirohy noho ny resaka kolikoly ry zareo.
Mèdia.cat, mpitsikera haino aman-jery any Catalan, dia nanadihady io resaka io tahaka izao :
…ohatra iray amin'ny tranga hafahafa manodidina ny tranganà kolikoly [any Espaina], ao anatin'izany ny raharahan'i Gürtel sy i Brugal [es], izay ny mpitory no mandeha tsaraina alohan'ny ampangaina. .
Roa taona taorian'ny fanadihadiana, Dante sy Sibina dia namoaka andian-dahatsary tao amin'ny Youtube mitantara ny vokatry ny fikarohan'izy ireo, amin'ny fiteny Catalan sy Espaniola, mitondra ny lohateny hoe El Major robatori de la història de Catalunya na ” Ny Halatra Goavana indrindra teo amin'ny Tantaran'i Catalan.” Nanazava ny tambajotram-pifandraisana misy amin'ny rafitra ara-pahasalamana an'ny fanjakana sy ny tsy miankina any Catalan ireo lahatsary ireo no sady niampanga mpiasam-panjakana ambony maro ho mahazo tombontsoa aminà fifanarahana misanda amanà euro an'hetsiny maro ho an'ny orinasan-dry zareo manokana.
Ilay lahatsary dia mampiseho amin'ny antsipirihiny ireo tranga toy ny momba an'i Josep Prat, talen'ny Institut Català de la Salut (Catalan Healthcare Institute na ICS) sady talen'ny vondron'orinasa Innova, na ny an'i Ramón Bagó, filoha sady manana petrabola betsaka ao amin'ny vondrona Serhs, izay nitàna toerana ambony maro tao amin'ny Conscorci de la Salut i Social de Catalunya (CSC), rantsana hafa ao amin'ny rafitra ara-pahasalamana nandritra ny taona vitsy.
Tsy ny gazetiboky ihany no mety ho bankirompitra fa na ny mpanonta ihany koa, ka izany no nitarika an'i Dante sy Sibina hamoaka hafatra tamin'ny tranonkalany , “Efa nanao izay azonay natao izahay. Ankehitriny mila ny fanampianareo izahay” [ca].
Ireto misy ampahan-dahatsoratra vitsivitsy :
Manoloana ny fahanginan'ny antoko politika Catalan sy ny haino aman-jerim-panjakana, nanapa-kevitra izahay taona vitsy lasa izay mba ho tonga hatrany amin'ny farany amin'ity resaka ity. Nahita hadalana maro izay tsy noeritreretinay ho hita izahay (http://ow.ly/dRqs1%29) [es, ca].
Nefa araka izay niandrasanay azy, ireo izay nandany telopolo taona ka lasa mpanankarena tamin'ny famitam-bahoaka izay lasa mitroatra sy miampanga
Na dia eo aza izany fiampangana izany, matanjaka foana izahay. Tsy hilefitra izahay. Tsy misy tsara toy ny manao zavatra tsara mifanaraka amin'ny fieritreretanay. Afaka hiteny isika afaka taona vitsy hoe : ” Ataonay izay azonay atao” (http://ow.ly/dRrEJ) [es, ca].
Tonga amin'ny tsy azo anoharana izahay izao (http://ow.ly/dRrLS), na izany aza , dia mila fanampiana. Tsy afaka hiatrika irery ireo hery ireo izahay. Izany no mahatonga anay hanoratra aminareo. Hiatrika fitsarana izahay amin'ny faha 27 Septambra, amin'ny 9 :30 AM (http://ow.ly/dRrQT) mialoha ny hitsarana ireo olona (http://ow.ly/dRrYH) ao amin'ny tantara navoakanay (http://ow.ly/dRsba). Mila ny fanampianareo izahay hanameloka ny sivana goavana mianjady aminay. Noho izany, raha manana minitra kely ianao dia alefaso ity soratra ity any amin'ny namanao, na olona manana fifandraisana aminao, na ireo manam-pahefana eto an-toerana, na ireo izay rehetra heverinao, dia manao asa lehibe ho anay ianao.
Misy fanentanana ho fanohanana amin'ny aterineto. Ny vaovao rehetra manodidina io fitsarana io dia hita ao amin'ny tranonkala Lademandadevia.org [ca, es], izay azon'ny mpampiasa hanamarinana ny fanoherany ” Valinteny no ilainay, fa tsy fitsaràna”, tohanan'ny sonia 2.300. Io fanoherana io dia mangataka ny hamalian'ny Filohan'i Catalan Artur Mas ny fanontaniana napetraka vokatry ny fikarohana nataon'i Dante sy i Sibina, aseho amin'ny lahatsary etsy ambony sy ny lahatsary “Carta Oberta al President Artur Mas” ( Taratasy misokatra ho an'ny Filoha Artur Mas). Amin'ny zavatra maro, ireo mpanentana amin'ny fanoherana dia manao izao fitarainana izao :
Mandaha-teny sy mampiasa voambolana i Marta [Sibina] sy i Albano [Dante], manangona ireo pitsopitson-javatra amin'ny zavatra afenina sy tiana tsy araha-maso ka nametraka fanontaniana mifandraika amin'izany amin'ireo mpanao politika tompon'andraikitra amin'ity raharaha ity izy ireo. Nandeha ny fotoana ary dia mbola miandry valin-teny, adihevitra sy mangarahara ry zareo. Nefa, valibontana avy amin'i Josep Maria Via, iray amin'ny mpanolotsain'ny Filoha Mas no voarainy ho solon'ireo valin-teny, adihevitra misokatra sy fangaraharana.
Heverinay ho toy ny fanaovana ramatahora sy fampanginana ny feo samihafa mahasahy mitsikera politikan'ny fahasalamanan'ny governemantan'i Catalan io fitoriana io.
Ny tenifototra tahaka ny #ViaVol20mil (#ViaWants20thousand) sy ny #27S (#Sept27) amin'ny Twitter, no ampiasaina mba hanamarihana ny fanohanana an'i Dante sy i Sibina ary mikarakara ny fanoherana manoloana ny varavaran'ny fitsarana amin'ny fanombohan'ny fitsarana. Raharaha mifanontona amin'ny vanim-potoana mana-tantaran'i Catalan izay hiadian'ireo mpitarika ny fahaleovantena amin'i Espaina, mifamatotra amin'ny fandaharam-potoana ara-politika ny governemanta amin'ny herinandro ho avy, toy ny fifidianana tsy ara-potoana sy ny fitsapan-kevi-bahoaka hahazahoana ny fahaleovantena amin'ny fomba ôfisialy. Io no santionan'ny hafatra :
@Estacadebares Tsarovy fa #ViaVol20mil no nampangina @cafeambllet. @ciu ary ny sosialista no nandroaka ny fikarakarana ny fahasalamana . Fahaleovantena tsy misy CiU
@BravidDavo Ry Catalan, rehefa mpangalatra na Catalan ary izy dia dia mpangalatra foana izy izay.#ViaVol20mil